काठमाडौ । जागर र पौरखमा सिप घुलाउन सके सुन बनाउन सकिन्छ । आफ्नै माटोलाई पगालेर मोती बनाउँन सकिन्छ । नेपाल सम्भावना नै सम्भावना भएको देश हो । यसैले हामी आज हाम्रा भीर पाखाबाट कसरी आम्दानी गर्न सक्छौ भन्ने जानकारी दिँदैछौ । अर्गानिक वल्र्ड प्रा।लीले काभ्रेका विभिन्न ६ वटा सामुदायिक वनमा चारकोल बनाउन किसानहरुलाई.....
काठमाडौं । राजधानीको दक्षिणकाली नगरपालिका–१३ स्थित कटुवाल दहमा नाग देखापरेको छ । बाग्मती नदीमा बनेको ‘कटुवाल दह’ भन्दा केही मिटरमाथि गत पुस २९ गते नाग पहिलो पटक देखापरेको थियो । स्थानीयका अनुसार त्यस यता नाग लगातार निस्कने गरेको छ । ‘दिनमा चार पटकसम्म निस्कन थालेको छ’ स्थानीय पञ्च बहादुर लामाले भने,.....
रोचक । हरेक चिजको आ आफ्नै महत्व हुने गर्दछ । कसैको सामान्य लाग्छ त कसैको अचम्म लाग्छ । तर धेरै महत्व भएका चिज सायदै भेटिने गर्दछ । त्यही भएर पनि होला त्यस चिजको महत्व धेरै नै हुने गर्दछ । यसतै संसारलाई अचम्मित बनाउने एक ढुंगा भेटेका छन् जुन ढुंगा ढण् केजिको छ । त्यस ढुंगा ९० केजी भएका कारण मात्र हैन महत्व.....
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, लेखि सेयर गरौं ! मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ । त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!! अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ.....
धुम्रपान मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । धुम्रपानका कारण मुटुरोग, विभिन्न प्रकारको क्यान्सर तथा शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू आउँछ जुन हा’नीकारक हुने गर्छन् । धुम्रपान छोड्नु गाह्रो हुन सक्छ । धुम्रपान छोडेपछि स्वास्थ्यमा सुधारहरू हेर्नका लागि लामो समय लाग्ने धेरैको सोच हुन्छ । तर, वास्तविक लाभहरू.....
काठमाडौं । भनिन्छ, पतिपत्नीबीच कुनै पनि कुरा लु’केको हुदैन । आफूले भो’गेका ती’ता-मिठा सबै अनुभव साटासाट गर्दछन् । उनीहरुले एकअर्काका दुःख सुख साट्ने गर्दछन् र समस्यामा भएमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दछन् भन्ने मा’न्यता हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ । तर कुनै कुनै कुरा यस्ता हुन्छन् जसलाई उनीहरुले एक अर्कालाई.....
घरमा बसि पैसा कमाउन चाहानुहुन्छ ? घर मा बसेर यसरी पैसा कमाउनुहोस
पढाइ सकियो, तर जागिर छैन ।’ यो धेरैलाई लागेको सम स्या हो । तर जागिर खोजेर समय वर्वाद गर्नुभन्दा आफुले केहि काम सिके जागिरले आफुलाई खोज्दै आउँछ । नेपा लमा केहि काम गर्नेहरुको यति खडेरी छ कि तपाईं सोच्न समेत सक्नुहुन्न । यी काम सिके बेरोजगार बन्नुपर्ने वाध्यता हट्छ भने राम्रो कमाई पनि हुन्छ । १. तपाईंले.....
तिमी उठेनौ भने गरिबका छोराछोरी कसरी डाक्टर बन्न सक्लान ? अबस्य पढनुहोस
भ्रष्टाचारी, तस्करको अखडामा निशास्सिएको शहरमा निर्दालाई मुर्दा बनाएर कुटिन्छ यहाँ, के गर्छौ र डा केसी तिम्रा शरिरका रौ हरु पलपल गनि गनि लुटिन्छ यहाँ, तिमी नखाएर सुत्छौ त के भो यहाँ डकारेर सुत्नेहरुकै इज्जत छ, भो नसुत अब घुम्ने मेच माथी डा केसी तिमी बलिको बोको बन्ने निश्चित छ, यो देशका काकाहरुलाई तिमी मरेकै.....
झुटो होईन नेपालकै शक्तिसाली मन्दिर देवीको मन्दिर नबनाउँदा वास्था नगर्दा ६० जनाको नि’धन
काठमाडौँ । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरको तल अक्कर भीर र सुनकोशी नदी रहेको छ । काठमाडौंबाट बनेपा–धुलिखेल–भकुण्डेबेसी–नेपालथोक हुँदै खुर्कोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिट्ठे भीर । जुन ठाउँको सडकमा हजारभन्दा बदी ऐनाहरु टाँसेको देख्न सकिन्छ । सडकको भित्ताभरी ऐना टास्नुको.....